कसले सम्झाउँने ? कार्की नेता हुँदा रावल खरदार :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
काठमाडौं । गत शुक्रबार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको दशांै बैठकमा भाग लिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले अकल्पनीय हर्कत प्रदर्शन गरेका छन् । बिहानै पिएर गएका हुन् या अघिल्लो दिनकै ह्याङओभरका कारण उनले यस्तो हर्कत गरेका हुन् ? त्यस दिन बालुवाटारका सुरक्षाकर्मीहरूसमेत अन्योलमा थिए । विपक्षी दलहरुसँग अन्टसन्ट प्रश्न गरेर चर्चामा ल्याउनु प-यो भने एमालेले त्यस्ता बैठकहरुमा भिम रावललाई पठाउने गरेको छ । कांग्रेससँग चर्को कुरा गरेर आप्mो पार्टीबाट ठूलो भाग लिने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका माधव नेपाल पक्षिय रावलले ओलीलाई खुशी पार्न यो हथकण्डा प्रयोग गरेको हुन सक्ने एमालेभित्र चर्चाछ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने बैठकहरूमा सहभागी हुनेहरूलाई सुरक्षा निकायले गहिरो चेकजाँच गरेपछि मात्रै भित्र छिर्न दिन्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने निर्देशक समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता वा उनले तोकेको कुनै व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ । बैठक प्रारम्भ नहुँदै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अनुमतिसमेत नलिई एमाले उपाध्यक्ष रावल स्वेच्छाचारी, निरंकुशभन्दै कुर्लन थालेपछि एकाएक बैठकको बातावरण विथोलियो । यसअघि पनि सर्वदलीय बैठकमा जाँदा कांग्रेसका नेताहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा गाली गर्दै आफ्नो पार्टीभित्र हिरो बन्ने प्रयत्न रावलले गरिरहेका हद्रन्थे । कांग्रेसका नेताहरूलाई ठीक गर्न के गनद्र्रपर्छ मैले जानेको छद्र भन्दै प्रायःजसो बैठकमा रावल नै जान चाहन्छन् एमालेका एक नेताले तरुणसँग भने ।
शद्रक्रबारको बैठकमा पनि त्यस्तो हर्कत देखाउन थालेपछि अर्थमन्त्री एवं कांग्रेसका शालिन नेता ज्ञानेन्द्रबहादद्रर कार्कीले मसिनो स्वरले विनम्र भाषामा भने– ‘रावलजी यो टद्रँडिखेलको आमसभा होइन, विस्तारै बोले पनि हद्रन्छ ।’ फेरि नम्र भाषामा अर्थमन्त्री कार्कीले भने– ‘टद्रँडिखेलमा भाषण गर्दा बोल्ने शैली यहाँ प्रयोग गरिरहनद्र आवश्यक छैन, कहाँनिर स्वैच्छाचारी र निरंकद्रश भयो ? के भूकम्प पीडितलाई रकम दिन आवस्यक छैन ? तर रावल मत्थर भएनन् । उनले अझै चर्को र तामासी भाषा प्रयोग गर्दै भने– ‘भूकम्पपीडितलाई एक लाख रुपैयाँ थप्ने निर्णय कसको आदेशमा, कद्रन प्रकृयाबाट भयो ? निर्देशक समितिको स्वीकृति चाहिन्छ कि चाहिन्न ? जवाफमा अर्थमन्त्री कार्कीले भने– ‘रावलजी तीन लाख रुपैयाँले घर बन्छ ? एक लाख थप्नद्रपर्छ भन्ने तपाईलाई लाग्दैन र ? यदि लाग्छ भने विधिविधान मिलाए भइहाल्छ नि ?’ त्यसपछि रावल जद्ररुक्क उठेर तपाईलाई म राम्रोसँग चिन्दछद्र ? वल्र्ड बैंकबाट भूकम्प पीडितका लागि ४४ अर्व रकम आएको एक हप्ता नपद्रग्दै एमाले उपाध्याक्ष रावललाई उफर माउलो भएको हो । कार्की अर्थमन्त्री भएकै समयमा अहिलेसम्मकै बढी रकम अर्थात एकै पटक ५० अर्व रकम नेपालले प्राप्त गरेको थियो ।
यतिबेला पदीय हिसाबले रावल एमालेका उपाध्यक्ष हद्रन्, कार्की केन्द्रीय सदस्य मात्रै हद्रन् । तर २०४० सालताका तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री नैनबहादद्रर स्वाँरको निगाहमा रावल खाद्य संस्थानमा खरिदार तहको अस्थायी जागिर खाँदै गर्दा कार्कीले नेविसंघको अध्यक्ष भएर पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलन हाँकेको थियो । उक्त बैठकमा कार्कीले रावललाई यो कद्रराको स्मरण गराए कि गराएनन् ? खद्रल्न सकेको छैन ।
Tarun Khabar0response मंगलबार,१ फाल्गुन २०७४ 296 Views